5 dhaqamo sanadka cusub ee waalan ee wadamadii hore ma aadan aqoon
Libaaxyo iyo ubaxyo ku yaal albaabka Ishtar ee Baabiloon ee Matxafka Pergamon ee Berlin. Sawirka: Josep Renalias / Wikimedia Commons
Dadka deggan Baabuloon, iyo sidoo kale Sumer, Akkad iyo Ashuur ayaa mar u dabaaldegay sanadka cusub ee dayrta, laakiin markii dambe fasaxa ayaa dib loo dhigay guga. Baabuloon qarnigii labaad ee BC, Akita wuxuu bilaabay in loo dabaaldego maalinta koowaad ee bisha Nisan (Maarso-Abriil) G. Suggs wuxuu ahaa mid faraxsan. Weynaanta Baabuloon. Taariikhda ilbaxnimada qadiimiga ah ee Mesobotamiya 11 maalmood oo isku xigta, sida fasaxyada sanadka cusub.
Akitu waxa lala xidhiidhiyay mid xiiso leh G. Suggs. Weynaanta Baabuloon. Taariikhda ilbaxnimada hore ee dhaqanka Mesobotaamiya. Taallada Marduk, oo ah ilaaha ugu sarreeya ee Baabuloon pantheon, ayaa laga soo qaaday macbadka weyn, inta lagu guda jiro fasaxa waxaa markab lagu qaaday guriga Akita. Kanu waa macbud ku yaal bannaanka derbiyada magaalada. Sida muuqata, xitaa Ilaah baa faa'iido u leh mararka qaarkood in laga baxo magaalada.
Taalada ilaaha Nabu, ina Marduk, ayaa laga helay magaalada Kalhu. Taalooyinka Marduk laftiisa weli lama helin; wuxuu ku badbaaday oo kaliya on bas-reliefs. Sawirka: Osama Shukir Muxamed Amiin / Wikimedia Commons
Waxaana madax u ahaa boqorkii Baabiyloon. Markii taallada la keenay, ayaa wadaadkii sare karbaash ku garaacay boqorka, dhegahana wuu jiiday oo dharbaaxay. Waxaa la aaminsanaa in haddii isla markaas boqorku uusan iska celin karin qaylada iyo oohinta, sanadka wuu farxi lahaa.
Haddii wadaadku aanu aad u qiiroonayn oo madaxdii qaranku aanu dhibin, markaas xukunkiisu wuu dhammaaday. Sababtoo ah ilaaha Marduk ma jecla dadka kibirka leh iyo dadka qaba xanuunka xad-dhaafka ah.
Dadka caadiga ah, fasaxu wuxuu ahaa mid aad u farxad badan G. Suggs. Weynaanta Baabuloon. Taariikhda ilbaxnimada hore ee Mesobotamiya. Waxa uu furay xilli beereedka iyo beerashada, waxa kale oo uu la xidhiidhin jiray dhaqanka ka bixista magaalada, kormeerida dhulkooda iyo ku raaxaysiga hawada nadiifka ah.
Sawirka Amentet iyo Ra ee qabriga QV66 ee Queen Nefertari Merenmuth. Sawirka: Zenodot Verlagsgesellschaft mbH / Wikimedia Commons
Upet-Renpet, tani waa bisha ugu horreysa sanadka ee kalandarka Masaaridii hore. Waxaa la xusayey markii Sirius oo ah xiddiga ugu iftiimaya cirka habeenkii uu markii ugu horreysay ka kacay webiga Niil ka dib muddo 70 maalmood ah oo aan la arkin. Waa qiyaastii badhtamaha Luulyo, marka uu wabigu buuxdhaafo. Waana waqtigan xilliga beeralayda ay billaabanayaan Masaarida.
Upet-Renpet, iidda bacriminta, iyo waa maxay Wepet Renpet? / Study.com ereygani wuxuu macno ahaan u eg yahay furitaanka sanadka.
Masaaridu waxa ay u dabaal dageen Upet-Renpet xaflad weyn, taas oo ay ahayd in ay cabbaan khamri badan. Tani waxay la xidhiidha hal khuraafaad qadiim ah, E. Hornung. Sheekada sirta ah ee Masar: Saamaynta ay ku leedahay Galbeedka.
Mar ilaaha qorraxda Ra ayaa ku kacay cag qaldan oo uu go'aansaday in uu baabi'iyo aadanaha wax yar. Waxa keliya oo ay dadku noqdeen kuwo akhlaaqdaro xumaaday, oo ay addeeci jireen isaga, oo ay lagama maarmaan noqotay in la ciqaabo.
Ra wuxuu u diray gabadhiisa, ilaahadda dagaalka iyo aargoosiga ee Sekhmet, si uu taas u sameeyo. Uma badna in qofna uu ogolaado fikirka ah in qofka awood u leh in uu abuuro lamadegaanka neefsashada uusan la qabsan karin nooc ka mid ah bini'aadantinimada. Sekhmet waxay isu beddeshay libaax weyn waxayna bilowday inay dadka baabi'iso tiro intaas le'eg, taas oo keentay in maalintii xigtay weerarkii ugu horreeyay ka dib, kuwii badbaaday ay bilaabeen inay mar hore dhintaan sababtoo ah E. Hornung dhab ahaantii wuu dhintay. Sheekada sirta ah ee Masar: Saamaynta ay ku leedahay reer galbeedka ee dhiiga saaxiibadooda la dilay maalin ka hor.
Bas-relief of Sekhmet ee macbudka ee Kom-Ombo. Sawirka: Gérard Ducher / Wikimedia Commons
Markuu arkay gumaadka ay soo diyaarisay gabadhiisa, Ra wuxuu go'aansaday inuu yara faraxsan yahay wuxuuna ka codsaday inay joojiso. Sekhmet, oo lagu soocay dabeecadeeda gardarrada, ma adeecin. Ra waxa ay gartay in aanu si fudud ula qabsan karin iyada. Talada ilaaha xigmadda, Thoth, wuxuu ku martiqaaday inantiisa inay ka nasato dilalka oo ay qabow ka cabto.
Ra waxay ku shubtay biirkeeda cas, kaas oo u ekaa dhiiga aadka loo jecel yahay ilaahadda, ilaa Sekhmet uu cabbay dhowr kun oo caag ah. Isagoo sakhraansan oo luminaya awooddii uu ku joogsan lahaa boos toosan, Sekhmet wuxuu u sheegay dadkii badbaaday: Markaa ha noqoto, halkan ka baxa. Qof walba waan cafiyay, oo waan seexday.
Markaa bani-aadmigu waa la badbaadiyay, wuxuuna lahaa sabab kale oo uu ugu mahadceliyo Raga xigmadda leh iyo naxariista leh. Tan iyo markaas, iyada oo lagu sharfayo dhacdadan, Masriyiintii hore waxay qabteen dabbaaldegga Upet-Renpet, Damaashaadka Masar hore / Taariikhda Adduunka Encyclopedia, oo ay weheliyaan qoob-ka-cayaar, muusig, orgys iyo, dabcan, libations badan. Waxayna is siiyeen maqaaryo madax libaax leh iyo sixirolo lagu qoray papyrus si ay uga dhaadhiciyaan RH Wilkinson. Ilaahyada dhamaystiran iyo ilaahyada Masar hore uma diyaarin doonaan Sekhmet aargudasho sanadka cusub iyada oo la adeegsanayo farsamooyinkeeda wasakhda ah ee caadiga ah. Tusaale ahaan, balaayada ha dirin.
U dabaal degaya sanadka cusub ee Shiinaha ee Malaysia. Sawirka: Farmashiistaha duulaya / Wikimedia Commons
Chunjie, Festival Guga, ama Sannadka Cusub ee Shiinaha, waa mid ka mid ah ciidaha ugu da'da weyn ee loo dabaaldego ilaa maantadan la joogo. Waxaa la rumeysan yahay inay asal ahaan ka soo jeedaan in ka badan 3,000 oo sano ka hor, xilligii Shang Dynasty.
Sannadka cusub ee Shiinaha waxaa had iyo jeer loo dabaaldegaa si aad iyo aad u weyn. Dadka dalka deggan waxay shidaan rashka, fooxa shidaan, gongyada garaacaan, guud ahaan, waxay sameeyaan buuq badan intii suurtagal ah. Dhaqankani waxa uu leeyahay sabab gaar ah, in kasta oo khuraafaad ah, ee H. Yuan. Sixirka Lotus Lantern iyo Sheekooyin kale oo ka yimid Shiinaha Han.
Beri dalka Shiinaha waxaa ku noolaa masduulaagii dhiigyacabka ahaa oo la odhan jiray Nian (ereyga Shiinaha 年 macnihiisu waa sannad). Sannad kasta waxa uu ku wareegaya dhammaan tuulooyinka deegaanka, isaga oo cuni jiray xoolo, badar iyo waxyaabo kale oo wanaagsan. Gaar ahaan carruurta. Dadka Shiinaha ayaa masduulaagii allabaryo u dhigay meel ka baxsan albaabkooda si ay isaga raalligeliyaan.
Laakiin hal tuulo ayaa waxaa ka soo muuqday oday yaab leh oo yiri: waa ku filan tahay inaad u adkaysato! Dadka deegaanka, si dabiici ah, waxay u tixgeliyeen inuu yahay mid aan caadi ahayn, sababtoo ah masduulaagii oo dhan wuxuu baarayaa khuraafaadka Shiinaha, oo dhererkiisu yahay dhowr kiiloomitir, wuxuu u muuqdaa mid cajiib ah marka loo eego awoowe. Laakin odaygii ayaa faynuusyadii shiday, oo shiday waxyaalihii dabka ahaa, waxa uu bilaabay in uu gongkii garaaco, markii uu Nian yimidna aad buu uga yaabay qayladaas, waxa uu go'aansaday in uu dembiga ka cararo.
Muddo ka dib, Nian wuu gaajooday wuxuuna halis u galay inuu ku laabto tuulada. Xoreeyihii da'da ahaa ayaa mar kale ku salaamay rashka, laakiin markan masduulaagii ma cabsan. Nian wuxuu ku sigtay inuu liqo odayga, laakiin wuxuu codsaday inuu u ogolaado inuu iska bixiyo marka hore, sababtoo ah cunista dadka marada leh waa wax aan dhadhamin. Masduulaagii wuu aqbalay, odaygiina wuxuu iska siibay dharkii, oo ay ka muuqatay nigis cas oo cas.
Qoob-ka-ciyaarka Dragon ee Taiwan. Sawirka: 蔡 滄 龍 / Wikimedia Commons
Nanny waxay lahayd meel daciif ah, chromatophobia. Masduulaagii wuu necbahay casaanka. Isagoo ooynaya ayuu la duulay. Waxa uu ka soo horjeeday dadka Shiinaha baray in ay gubaan faynuusyada cas iyo rashka, garaaca gongs iyo xidhashada maro cas si ay uga cabsiiyaan Nanny mustaqbalka. Magaca odayga waxa la odhan jiray Hongjun Laozu, waxa uu ahaa khuraafaad halyey ah Asalkii sanadka cusub ee dayaxa iyo Halyeygii Nian / Asalkii hore ee Taoist suufi.
Xirtey Hongjun si dabiici ah ma ahan shalash sirta Victoria ee sirta ah, laakiin surwaalka Shiinaha ee qadiimiga ah ma waxay gashan jireen nigis hoostooda goonnada / lebbiska? / Quora dubi-kun. Kaliya casaan
Sababtoo ah sheekadan sanadka cusub ee Shiinaha waa dabbaaldegga dhammaan hadhka cas. Dadku waxay guryaha ku qurxiyaan faynuusyo guduudan, waxay siiyaan dadka ay jecel yihiin baqshado waraaqo casaan ah oo ay ku jiraan rabitaan iyo lacag, waxay ku daboolaan daaqadaha maro cas, waxay ku qoraan hambalyo warqad casaan ah, oo ay xidhaan dhar cas. Weli way shaqeysaa: in kasta oo ay jiraan tirooyin badan oo Nanny ah oo ay dejiyeen qoob-ka-cayaarayaasha waddooyinka damaashaadka, masduulaagii weynaa dib looma arkin.
Faaliyaha oo tufaax lagu tuurayo Samhain. Waxa sawiray Daniel MacLeese, 1833
Samhain, dabbaaldegga Celts-kii hore, oo lagu xusayo P. Monaghan. Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore waa dhamaadka goosashada iyo bilowga badhkii madaw ee sanadka, marka ay qabow iyo cabsi. Waxaa la xusay habeenka 31-ka Oktoobar ilaa 1-da November. Laga soo bilaabo fasaxan, sida aad fahantay, Halloween waxay dhacday qarniyo ka dib.
Samhain wuxuu bilaabay in lagu dabaaldego xilligii Neolithic, waxaana lala xiriiriyay dabka iyo allabaryada. Si adag u hadlaya, taariikhyahanadu wali waxay ku doodayaan R. Hutton. Saldhigyada Qorraxda: Taariikhda Sannadka Ritual ee Britain, haddii loo tixgeliyo Sannadka Cusub ee Celtic, sababtoo ah Imbolc (February 1), Beltane (May 1) ama Lugnasad (Ogosto 1) ayaa sidoo kale noqon kara. Laakiin Samhain waxay u badan tahay inuu ahaa kan ugu muhiimsan dhammaantood.
Habeenkan, labada ruux ee awoowayaasha iyo dhammaan noocyada shaydaanka ayaa dhulka wareegayay. Midka hore waa in lagu quudiyo miiska xafladda, ka labaadna waa in laga cabsado birta iyo milixda. Haddii kale, labadoodaba si xun bay kuu samayn doonaan. Waqtigaan, waxaa sidoo kale caado u ahayd in la sameeyo caadooyin lagu dejiyo kuwa dhintay oo looga sheekeeyo awoowayaasha habeenkii si ay u fahmaan inaan la ilaawin. Iyo sidoo kale in la sameeyo faal-sheegid kala duwan, sababtoo ah ruuxa ayaa kaa caawin kara inaad eegto mustaqbalka.
Celts waxay isku dayeen P. Monaghan habeenkii Noofambar 1. Encyclopedia of Celtic Mythology iyo Folklore waxay u labistaan ​​sida cabsida leh ee suurtogalka ah. Ugu yaraan, dharkaaga gudaha u rogo. Haddii aad nasiib leedahay, kuwa dhintay waxay qaadan doonaan naftooda oo ma xumaan doonaan.
Mummers-gii ayaa ku soo ururay dad badan, waxayna soo qaateen dhafoor fardo ah oo ul saaran oo ay tuulooyinka dhex mareen. Xafladda ayaa loogu magacdaray Faras Cawlan. Kuwii u yimid faraskan waxay ku qasbanaadeen inay quudiyaan isaga iyo kuwa horboodayaba.
Qurxinta Sannadka Cusub ee Celtic ee caadiga ah. Sawir: Rhŷn Williams / Wikimedia Commons
Haddii kale, muusikiiste waxay bilaabeen inay caayaan dadkii guriga lahaa, iyo aayad, waxayna ahayd inay sidaas oo kale ugu jawaabaan. Dhalinyaradii faraska la socotay waxay wateen dhar dumar, habluhuna waxay xidheen dhar rag ah.
Laakin xardhida nalka bocorka caanka ah ee Jack ma aha dhaqan qadiimi ah. Tooshkii iyo waji-xidhkii u horeeyay ee la mid ah waxa bilaabay R. Hutton. Saldhigyada Qorraxda: Taariikhda Sannadka Cibaadada ee Ingiriiska oo laga sameeyay bagalka, rutabagas ama dabocase calafka kaliya qarnigii 19aad.
Saturnalia Rinjiyeynta Antoine-Francois Callet, 1783
Muddo dheer, Roomaaniyiintii hore waxay u dabaaldegayeen sanadka cusub ee March 1. Si kastaba ha ahaatee, Julius Caesar, oo xukunka la wareegay, ayaa soo bandhigay kalandarka Julian, kaas oo xisaabinta maalmuhu ay soo bilaabatay Janaayo 1. Waxay bilaabeen inay u dabaaldegaan horraantii 17-ka Diseembar, si aysan naftooda ugu dhibin rajo aad u daran. Dabaaldegga 17-aad ilaa 23-aad waxaa lagu magacaabi jiray Saturnalia, oo lagu sharfayo ilaaha Saturn, oo ah ilaaliyaha beeraha. Waqtigaan, dhammaan shaqadii beeralaydu waxay ku dhowdahay inay dhammaadaan, dadkuna way nasanayeen.
Saturnalia, Roomaaniyiintu waxay isweydaarsadeen hadiyado, cabbeen oo waxay lahaayeen madadaalo. Waxaa ka mid ahaa hadiyadihii S. Blake. Taariikhda Dabiiciga ah ee Martial: The and and Pliny's Encyclopedia / Arethusa Piggy bangiyada, shanlooyinka, cadayga, koofiyadaha, mindiyaha ugaarsiga, faashashka, nalalka kala duwan, kubbadaha, cadarka, tuubooyinka, doofaarka nool, sausage, baqbaqaaqyada, miisaska, koobabka, malqacadaha, dharka, sawirada , waji-xidho iyo buugaag. Taajirku wuxuu bixin karaa adoomo ama xayawaan qalaad sida libaaxyada. Waxaa loo tixgeliyey qaab wanaagsan ma aha oo kaliya inaad hadiyad sameyso, laakiin sidoo kale inaad ku dhejiso gabaygaaga gaaban.
Gabayaagii caanka ahaa ee Catullus ayaa si uun u helay R. Ellis. Faallooyin ku saabsan Catullus waa gabayo xunxun oo uu tiriyey gabayaagii ugu xumaa ee abid saaxiibkiis, kaas waa kaftankii Roomaanka.
Khamaarka, kaas oo waqtiyada caadiga ah laga xanaaqi jiray, ayaa loo oggolaaday Saturnalia. Dabaaldegayaashu waxay sidoo kale doorteen Tacitus. Taariikhdii Boqorka iyo Boqorada Dabaaldegga oo ka mid ahaa dadkii martida loo qaybiyay, iyo amarkooda sida tan biyo qabow ku tuur! ama Qaawan oo hees! waxay ahayd in la sameeyo si aan shaki lahayn.
Janus iyo Moiraes ee Luca Giordano, 1682-1685. Faahfaahinta Palazzo Medici-Riccardi
Saturnalia ka dib, Janaayo 1st, SJ Green waa la dabaaldegay. Ovid, Fasti 1: Maalinta faallooyinka ilaaha labada waji leh ee Janus, markii dhammaan rabitaannada, sida ay qabaan Roomaanku, ay rumoobeen. Dadkii waxay isku siiyeen berde iyo malab, waxayna isweydaarsadeen erayo wanaagsan. Waxayna macbudka u keeneen nacnac iyo lacag si ay u qanciyaan Janus, siduu bilaabay cusub.
Laakiin maalintaas ma ahayn maalin fasax ah. Roomaanku waxay ku doodeen in ugu yaraan shaqo yar loo baahan yahay in la qabto, maadaama shaqo la'aanta loo arko inay tahay calaamad xun inta sannadka ka dhiman.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, 5 dhaqamo sanadka cusub ee waalan ee wadamadii hore ma aadan aqoon!